मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै रेणु र राजेन्द्रले ‘बबण्डर’ मच्चाएपछि अध्यक्षले निकाले यस्तो जुक्ति, ओली समेत तनावमा — Sanchar Kendra
१वैद्यले भने- बढी बोलेछु, आत्मालोचना गर्छु
२ओलीलाई ह’त्या गर्ने ध’म्की अएपछि एमालेले के भन्यो ?
३आफ्नै पार्टीका संसदले प्रधानमन्त्रीलाई ज्यान मा’र्ने ध’म्की दिएपछि कांग्रेसले मुख खोल्यो, विज्ञप्तिसहित
४ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहमाथि सुर्खेतमा आ’क्रमण, कति जना छन् घाइते ? हेर्नुहोस भिडियोसहित
५प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले दियो ह’त्या गर्ने धम्की ?
६राउटे युवतीमाथि भएको यौ’न दु’र्व्यवहारको भिडियो प्रसारण गर्ने साइट बन्द हुने, अदालतले दियो यस्तो आदेश
७नेपालको पूर्वी भेगबाट भित्रियो मनसुन, यस्तो छ आगामी ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान
८चौतर्फी बिरोध हुँदा पनि बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने ओलीको निर्णय
९अध्यादेशलाई रोक्दा नागरिकतासम्बन्धी समस्या भयावह हुन्छ- ठाकुर
१०सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले किन मजाकमा उडाए बाइडेन-जोनसनको याे एक तस्बिर ? यस्ताे छ कारण
११नीशाको त्यो दुर्घटना जसले अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी गरायो
१२आज ३७५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ६७ को मृत्यु
मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै रेणु र राजेन्द्रले ‘बबण्डर’ मच्चाएपछि अध्यक्षले निकाले यस्तो जुक्ति, ओली समेत तनावमा
प्रचण्ड गठबन्धनको केपी ओली सरकारमा सहभागी हुन अन्तिम तयारी भइरहेका रहेका बेला संघीय समाजवादी फोरम नेपालभित्र मन्त्री पदका लागि बबण्डर सुरु भएको छ ।
मन्त्री पदका लागि समानुपातिक सांसदद्वय रेणु यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीभित्र बबण्डर मच्चाएपछि आन्तरिक कलहलाई साम्य पार्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ जुक्ति निकालेका छन् । त्यो जुक्ति हो तत्काल सरकारमै सहभागी नहुने ।
अध्यक्ष यादवले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संविधान संशोधन र अन्य मुद्दाहरूका बारेमा छलफल गरेर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे अर्को निर्णय गर्ने स्रोतले बताएको छ । आन्तरिक विवादले दिक्क बनाएपछि यादव सरकारमै नजाने मनसायमा पुगेका छन् ।
संघीय फोरमका लागि ओलीले स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालय तथा एक राज्यमन्त्री दिने तयारी गरेकाे थियाे। जुन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले खाली पनि राखेका छन् । तर, फोरमभित्रको आन्तरिक विवादले सरकारमा जानेबारे बाटाे बन्द हुने देखिएकाे छ । फोरमभित्रको आन्तरिक कलहले ओली समेत तनावमा परेको स्रोतले बतायो । छिटोभन्दा छिटो सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोरमको आन्तरिक विवादले तनाव दिएको हो ।
तर अध्यक्ष यादवले भने आन्तरिक विवाद मिलाउन नयाँ कदम उठाएका छन् । यादवको नयाँ कदमले मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका समानुपातिक सांसदद्वय रेणु यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई ठूलो धक्का लागेको छ । आफूहरूलाई मन्त्री नबनाउने हो भने संघीय फोरमले ठूलो दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने भन्दै रेणु र श्रेष्ठले चेतावनी दिइसकेका छन् । संघीय फोरमभित्र प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेपर्ने बहुमत नेता र सांसदको जोड छ ।
आइतबार तीनकुनेस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकमा पनि समानुपातिक सांसदद्वय यादव र श्रेष्ठले कुनै पनि आफूहरू मन्त्री बन्नुपर्ने भनेर अध्यक्ष यादवलाई दवाव दिएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । ‘रेणु यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठजीले मन्त्री बन्नका लागि अध्यक्षलाई ठूलो दवाव दिनुभएको छ’, बैठकमा भएको छलफलका बारेमा जानकारी दिँदै एक पदाधिकारीले भने, ‘निर्वाचन जितेर आएका सांसदहरूले मन्त्री बन्न लबिङ गरे पनि रेणु यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठले जस्तो बबण्डर गरेका छैनन् ।’
रेणुले आफू महिला भएको, पूर्वमन्त्री र मधेसी भएकाले मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको ती पदाधिकारीले बताए । श्रेष्ठले आफू राजधानीबासी, पार्टीको सहध्यक्ष र जनजाति भएका कारण मन्त्री पाउनुपर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
यसैबीच प्रदेश ५ मा आज सरकार विस्तार हुँदैछ । प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकिरहेका बेला सोमबार मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरिएको हो ।
प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कम्तीमा ३ मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ ।
एमालेले दुई मन्त्रीको टुंगो लगाएको छ । प्रदेश ५ संसदीय दलको बैठकले लिला गिरी र आरती पौडेललाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो । गिरी सामाजिक विकास तथा सहकारी र पौडेल कृषि मन्त्री बन्ने बताइए पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसबारे केही बताएको छैन ।
त्यस्तै, माओवादीले गुल्मी १ ‘क’ बाट निर्वाचित सुदर्शन बराललाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । बरालले सम्हाल्ने मन्त्रालयबारे औपचारिक टुंगो नलागे पनि उनले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सम्भावना रहेकाे बताइएकाे छ ।
यसअघि फागुन ३ गते मुख्य मन्त्री सहित ३ जनाको मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा कुलप्रसाद केसी र वैजनाथ चौधरी नियुक्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।